Decor Sary Fametahana Sary - Famolavolana
Sary Fametahana Sary
Sary Fametahana Sary Ao amin'ny fananganana modely tiako te-hanome ireo eritreritra manodidina ny zava-misy, izay noheverinay ny antsika ary raisina ho toy ny sary amin'ny sehatry ny sary an-tsaina izany. Ny toe-javatra amin'ny alàlan'ny natiora indraindray ary mety haringana. Inona no ao ambadik'izany na inona hitranga rehefa tsy mety ho fambara ho avy ny bobongolo haingon-trano fa ny fananganana fomba vaovao. Sary hafa momba ny mety hitranga rehefa tapitra ny seho.
Anaran'ny tetikasa : Decor, Anaran'ny mpamorona : Johanna Mårtensson, Anaran'ny mpanjifa : Johanna Mårtensson.
Sary Fametahana Sary Johanna Mårtensson Decor